MINI Echiche eletriki, nyocha nke ihe nlereanya eletrik nke ga-apụta na 2019 | Akụkọ akụrụngwa
Otu BMW nwetara katalọgụ MINI - Rover Group - na 2001. Kemgbe ahụ, ahịa nke ụgbọ ala a na-ebili dị elu n'ụzọ dị ugbu a na e nwere nsụgharị dị iche iche nke ụgbọ ala ahụ: ntụgharị, ọnụ ụzọ 3 ma ọ bụ 5, 4 × 4 ma ọ bụ ụdị ụgbọ ala. Agbanyeghị, MINI na-arụ ọrụ iji weta ụdị eletrik zuru oke n'ahịa, rue ụbọchị ole na ole gara aga, ọ gosipụtara ọha na eze ihe a tụrụ anya na MINI Echiche eletrik.
N'ihi ọrụ nke MINI na BMW n'afọ ndị na-adịbeghị anya, e gosipụtara ya, karịa ihe niile, n'ụdị BMW i3. Ọ bụ ezie na ọ dịlarị na 2008, MINI wepụtara ụdị eletrik nke chọrọ ịbụ akwa ule maka mmepe nke teknụzụ a. Ya mere, ihe ọzọ anyị mere doro anya: na 2019 ụlọ ọrụ ahụ ga-emepụta ihe nrụpụta eletrik kpamkpam.
N'oge ụlọ ọrụ ahụ akụziworo naanị otu echiche, yabụ ngwaahịa ikpeazụ nwere ike ịdị iche n'akụkụ ụfọdụ, yana ụfọdụ mechara. Ugbu a, ọganihu ahụ bụ naanị na onyonyo. Ma nke ahụ bụ Na September 12, Frankfurt Motor Show ga-emeghe ọnụ ụzọ ya (Germany).
Ọzọkwa, ọdịdị nke nke a MINI Electric Concept dị iche na aesthetically na ihe nlereanya anyị maara ugbu a. Dịka ọmụmaatụ, wiil ya 19-inch nwere mmetụta nke ọdịnihu. Anyị nwekwara ike ịhụ akara 'E' n'akụkụ dị iche iche nke ihe nlereanya ahụ iji gosipụta oge niile na anyị na-eche ihu ụdị eletriki dị ọcha.
Ugbu a, ihe ga-adọta uche gị kachasị bụ otu ọhụụ ọhụụ. Ma n'ihu ma azụ bụ ọkụ zuru oke na ịkọwapụta, ndị nke azụ na-akpọ ọkọlọtọ Britain. Ọzọkwa pụtara ìhè bụ dum aerodynamic set na e biri ebi na 3D na na dị ka ika onwe ya ga-enyere ndị obodo kwụụrụ nke engine na-ọbụna ukwuu. Otú ọ dị, maka nkọwa ndị ọzọ - na teknụzụ - anyị ga-echere ụbọchị ole na ole. Ugbu a ọ kacha mma ịnụ ụtọ ihe oyiyi ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » MINI Electric Concept, nyocha nke ihe nlele eletrik nke gha aputa na 2019
smart ọhụụ EQ fortwo, nke a bụ otú Daimler si hụ ọdịnihu nke carsharing